संघीय सरकालाई कर्णाली प्रदेशसभाको धन्यवाद, नक्सा जारी गर्नु ऐतिहासिक !
कर्णाली प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक आइतवार शुरू भएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले पठाएको पत्रलाई सभामुख राजबहादुर शाहीले सुनाएर बैठक सञ्चालन गरेका थिए ।
बैठकमा संघीय सरकारले हिम्मत गरेर लिम्पियाधुरासहित समेटेर नक्सा बनाएको बताउँदै धन्यवाद दिएका छन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । उनले भारतले नेपाललाई हेप्न खोजेको बताउँदै त्यसको जवाफस्वरुप नक्सा निकाल्नु साहसिक कार्य भएको बताए ।
शाहीले भने, ‘सरकार सबैको हो । हुलका हुल नागरिक उद्धार गर्नुभयो । राज्यको पैसा खर्च गर्नु भयो होला । आठबीसका कोरोना संक्रमितलाई दैलेख राख्नु गलत नै थियो । अहिले नौ जनामा कोरोना संक्रमण भइसकेको अपुष्ट खबर आइसकेको छ ।’
उनले सरकारले एम्बुलेन्स पुग्ने स्थानमा तयारी गर्न सक्ने तर दुर्गम कर्णालीको अवस्था अझै पनि राम्रो नभएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्व सम्झिनु पर्छ,’ उनले भने, ‘वडाको अधिकार खोस्न पाइन्छ कि पाईदैन, हाम्रो काम कोअर्डिनेसन गर्ने हो । समन्वय गर्ने हो ।’
उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा तत्काल दिनेगरी कानून ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
‘एक नम्बर प्रदेशबाहेक अन्यत्र जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा पाएका छैनन्,’ शाहीले भने, ‘हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यक कानून बनाइदिनु पर्थ्यो, अहिलेसम्म बनाइएको छैन । सरकारको यतातिर ध्यान जान आवश्यक छ ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कंडेलले छिमेकी देशले यस्तै मौका छोपेर नेपालको भूभाग हडप्ने गरेको बताए ।
‘एक जनमाना थियो, सरकारको बैठकमा त्यो देशको प्रतिनिधि बसाल्ने मुलुक थियो,’ उनले भने, ‘यो समस्या पुरानो हो । नीति तथा कार्यक्रममा नै उल्लेख गरी सरकारका तर्फबाट नक्सा जारी गर्ने काम ऐतिहासिक अवसर हो । संघीय सरकारले हिम्मत राखेको छ ।’
उनले मनिषा कोइरालाप्रति सम्मान रहेको बताए । ‘उनले हिम्मत राखेर बोलेकी छिन् । सारा भारतका मिडिया नेपाल विरुद्ध लागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘परिस्थिति विशेष हो । कामकारवाही नियमित नै हुन्छ गर्नुपर्छ । दुई महिना अघि कोभिड थिएन । आत्मसमीक्षा गरौं ।’
उनले जथाभावी बजेट बाँडने काम गलत भएको बताए । ‘कति दिन हो कोरोना आतंक हुने, फिक्स छैन,’ उनले भने, ‘ढुकुटी सकिदै गयो भने हामी कहाँ जाने ? तपाईले बाँडेका पैसा खर्च गर्न नसकिने भनेकै बेलामा पैसा गयो त । दामासाहीको रुपमा हामीलाई पैसा आउँछ । जथाभावी पैसा बाँडदै गएको खण्डमा समस्या हुन्छ । ख्याल गर्नुहोस ।’
नेता कंडेलले सामाजिक दुरी कायम गरेर भएपनि काम गर्नुपर्ने बताए । ‘बन्दाबन्दीबाट निश्चित व्यक्तिले फाइदा लिएका छन् । निर्माण सामाग्री प्रयोग भइरहेका छैनन्, मूल्य बढेको बढ्यै छ । यसमा सरकारले समन्वय गर्न आवश्यक छ । क्वारेन्टाइनमा लट अनुसार राखौं,’ उनले थपे ।